Obama Iyo Romney oo dagaal adagi ku dhex maray doorashada maraykanka | Somaliland.Org
Obama Iyo Romney oo dagaal adagi ku dhex maray doorashada maraykanka
November 6, 2012	Washigton (Somaliland.Org)- Kumanaan milyan oo qof oo mareykaan ah ayaa maanta u codeeyay in ay go’aan ka gaadhaan in ay dib u doortaan madaxweynaha dimoqraadiga Barack Obama ama iney xilka gacanta ka saaraan hoggaamiyaha jamhuuriga Mitt Romney.
Codbixintani ayaa soo afjartey tartan dagaal adkaa oo soo bilowdey laba sano ku dhawaad, islamarkaana qarash gareysey adduun gaadhaya 2 bilyan oo doolar.
Goobaha codbixinta ayaa muujinaya in qoorta la iskula jiro tartankan, inkasta oo madaxweynuhu faro cididood ku hoggaaminayo goobaha qaar.
Doorashadii madaxtinimada ee 2008 waxa codeeyay dad ka badnaa 130 million oo qof.
Goobaha codbixinta ee New Jersey and New York ee ay waxyeeshay duufaantii Sandy toddobaad ka hor ayaa lagu tilmaamey in ay dadka u soo baxey codbixintu aad u miisaan lahaayeen.
Mr Obama ayaa isagu ka hor codeeyay ninka la tartamaya, waxaanu codkiisa ka sii dhiibtey bishii hore magaalada Chicago ee hoygiisa aheyd , waxaanu sidaa ku noqdey madaxweynihii ugu horeeyay ee isaga oo kursiga ku fadhiya sii codeeya maalinta doorashada ka hor.
Mr Romney and afadiisa Ann ayaa iyana ka codeeyay shaley subax magaalada Belmont, Massachusetts, waxaanu u sheegay warfidiyeenka inuu wax aad u fiican dareemayo.
Dhinaca kale, Inta badan ra’yiga dadka laga aruuriyay ee gobollada aadka loogu loolamay isku heysto ayaa muujinaya in Obama uu xoogaa yar ku horeeyo tartanka loogu jiro aqalka cad ee looga taliyo dalka Mareykanka.
Isagoo ka hadlayay banaanbax Florida, ayaa Madaxweyne Obama waxa uu sheegay in Mr Romney in uu dalka uun dib u dhigi doono.
Mitt Romney ayaa isna waxa uu sheegay in siyaasadaha Madaxweyne Obama ay fashilmeen. Labada nin ayaa mid walba waxa uu khudbado u jeedinayay taageerayaasha xisbigiisa. Tartankan madaxtinimada waddanka Mareykanka ayaa ah mid aad la isugu dhaw yahay.
Previous PostMurashaxa madaxweynaha UCID oo khudbad u jeediyay Taageereyaashooda BurcoNext PostMadaxweynaha Somaliland Oo qaabilay Madaxweynaha Shirkadda Genel Energy Oo Socdaal ku yimid dalka	Blog